Hogaamiyaasha Afrika Oo Muddo 3 Bilood Ah U Qabtay Golaha Millatariga Suudaan – somalilandtoday.com
Hogaamiyaasha Afrika Oo Muddo 3 Bilood Ah U Qabtay Golaha Millatariga Suudaan
(SLT-Qaahira)-Qaar ka mid ah hoggaamiyaasha qaarada Afrika oo kulan ku yeeshay magaalada Qahira ee dalka Masar ayaa u qabtay muddo saddex bilood ah inay ku dhamaystiraan dib u habeynta dimuqraadiyada golaha millatariga ee haya maamulka dalka Suudaan.
Go’aankan ayaa waxaa uu sii dheereynayaa waqti ay hore ugu qabteen ururka Midowga Afrika golaha millatariga ee Sudan inay ku wareejiyaan xilka dowlad rayid ah.
Golaha Milatariga dalka Sudan oo xukunka la wareegay 11kii bishan kadib markii ay afgambiyeen dowladii hore ee uu madaxweynaha ka ahaa Cumar Xasan Al-Bashir ayaa wajahaysa cadaadis kaga imanaya kumanaan banaanbaxayaal ah kuwasoo dalbanaya in dowlad rayid ah xukunka lagu wareejiyo.
Midowga Afrika ayaa haddii uu go’aan ka gaadho hogaanka Milatariga dalka Sudan waxaa wadankaasi soo wajahi kara in uu dhibaato kale gudaha u galo iyadoo haatan uu dalkaasi ku jiro qalalaase siyaasadeed.
Madaxweynaha dalka Masar Sisi oo ka hadlay kulankan oo ay ka qeybgaleen qaar ka mid ah madaxda dalalka qaarada Afrika ayaa sheegay in kulankan la isla oggolaaday baahida loo qabo in xal deg-deg ah oo kama dambeys ah ay ka gaaraan shacabka Sudan si dib loogu soo celiyo habkii dastuuriga ahaa.